तीजमा वर्त बस्दै हट्टि नट्टि अनुपम श्रेष्ठ तर कसको लागि ?(हेर्नुहोस भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEventतीजमा वर्त बस्दै हट्टि नट्टि अनुपम श्रेष्ठ तर कसको लागि ?(हेर्नुहोस भिडियो)
तीजमा वर्त बस्दै हट्टि नट्टि अनुपम श्रेष्ठ तर कसको लागि ?(हेर्नुहोस भिडियो)
September 3, 2018 Tulasa Karki Event, Kollywood, Videos 0
नेपालीहरुको महान चाड अन्तरगत पर्ने अर्को चाड हो कृष्ण जन्मअष्ठमी । कृष्ण जन्मअष्ठमीमा महिला तथा पुरुष दुवैले वर्त तथा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै मनाउने गर्दछन ।
यसै क्रममा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अहिले निकै रुचाइएकि एक्टर्स हट्टि नट्टि अनुपम श्रेष्ठ हिजो कृष्ण जन्मअष्ठमीको दिन आफु राधा बनेर कृष्ण जन्मअष्ठमी मनाएकि छिन । आम मानिसहरुले भन्दा पनि नेपाली सेलिब्रेटीहरुमा कुनै पनि चाड पर्वलाई बिशेष तरिकाले मनाउने चलन नेपालमा अत्याधिक रहेको छ ।
यसै क्रम हिजोको कृष्ण जन्मअष्ठमीमा अनुप श्रेष्ठले पनि विशेष तरिकाले आफु राधा बन्दै मनाएकी छिन । भने उनले अब आउदै तिजमा आफु वर्त बस्ने समेत बताएकी छिन । भने सो वर्त कसको लागि हो त्यो भने अहिले सार्वजनिक नगर्ने समेत उनले बताईन । उनको घरमा आयोजित कृष्ण जन्मअष्ठमी बिशेष कार्यक्रममा उनले सुत्र ईन्टटेन्मेन्ट संग कुरा गर्दै यसको खुलासा गरेकी हुन् ।
कृष्ण जन्मअष्ठमीमा उनि निकैनै सजिएर राधा सरह देखिएकी थिन । भने उनको साथमा कृष्ण बनेर उनलाई मनोज लामाले साथ् दिएका थिए ।
राधा कृष्ण अर्थात अनुपम श्रेष्ठ र मनोज लामा संगको बाकीं कुराकानी हेर्नुहोस भिडियोमा:
गौरा पर्व मनाउँदा दर्शकबाट यसरी घेरिए पूजा र आकाश